मान्छे खाने गोठ!
स्थानीय बुजुकलाई सम्झाए भने पनि—देउताको धाक लगाउँथे। देऊ उठाएर लगाइदिने डर देखाउँथे। यसरी पहाडबाट छाउपडी प्रथालाई ज्युँको त्युँ ल्याए बसाइसराईंका क्रममा। आज पनि पहाडी जिल्लासँगै कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला छाउपडी प्रथाले ग्रसित छ।
घर भन्दा सानो र केही पर बनाइन्छ गाईगोठ। त्यो भन्दा नि सानो र धे...रै पर बनाइन्छ छाउगोठ। त्यही गोठले मान्छे खान थालेको थुप्रो भयो। मान्छेले बनाएको गोठले मान्छेलाई निलिरहँदा पनि गोठ भत्किएन।
छाउगोठमा बसेरै शर्मिला र डम्मराले मात्रै होइन, अन्य धेरै दिदीबहिनीहरुले अकालमै ज्यान गुमाए। जसका कहिल्यै कुनै समाचार बनेनन्। गाईगोठमा बसेर कुपोषणका धेरै आमाहरुले नानी गुमाए। रक्तअल्पदाको कारण आफु रोगी भए। झोलिलो र तागतिलो खाने कुराको अभावमा बच्चा ख्याउटे र लुलालङ्गडा भए। समयमा दिन नपाएको खोपका कारण बच्चाहरु मानसिक रोगी भए। गोठको चिसोले सुत्केरी महिलाहरु गोठमै मरेको भेटिए। ती पीडा र दुःख गोठमै दबाइए। कयौं दिदीबहिनी बलात्कृत भए। तिनलाई गाऊँ समाजमै मिलापत्र गराइए। कतिले आफैंमा लुकाए। तैपनि आजसम्म बाँचेका दिदीबहिनीहरुले गाईगोठ, छाउगोठबाट छुट्टै बस्ने अधिकार पाएका छैनन्।
२०६३/६४ तिर एउटा संस्थाले (संस्थाको नाम नभनौं) छाउपडी प्रथाविरुद्ध जनचेतना जगाउन कैलाली, कञ्चनपुरमा अभियानै सुरु ग¥यो। जसमा धेरै वर्षसम्म छाउपडी प्रथा सम्बन्धी बहस र अन्तरक्रिया चलाइए। गाऊँ गाऊँका चोकमा स्थानीयलाई खेडेर सडक नाटकमार्फत् जनचेतना जगाए। तिनले आफ्नो प्रतिवेदनमा गोठ भत्किएको सार्वजनिक गरे। तर कागजी न्युनिकरण मात्रै भएको थियो। व्यावहारिक नतिजा हात लायो शून्य। फेरि पनि मानसिकतामा गडेर बसेको गोठले भौतिक गोठ निर्माण गरिरह्यो।
महिनावारी बार्नुको मुल कारण खोजें। व्यक्तिपिच्छे फरक मत पाएँ। हिन्दु धर्मका पण्डित तथा पुराणविज्ञहरुले फरकफरक कथा–कहानी सुनाए। मान्छेको आङमा काम्न सक्ने देउताहरुको शक्तिको बारे केही धामी–झाँक्रीहरुसँग छलफल गरें। देउताको उत्पत्ति कहाँबाट भयो? इसाइ धर्म र बुद्ध धर्ममा छाउ बार्नु पर्दैन भने हिन्दु परिवारमा मात्रै किन? विज्ञानले यसलाई किन स्वीकार्दैन? धर्मको बाटो लाग्ने कि विज्ञानको बाटो? यस्तै–यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दै क्रमशः उपन्यासका कच्चा पदार्थ बटुलेर खाका कोरें।
२०७० असारदेखि उपन्यास लेख्न बसें। बाहिर झरी परेको हुन्थ्यो, मभित्र पात्रहरुको बाढी आउँथ्यो। बाहिर आकाश गर्जिन्थ्यो, मभित्र प्रश्नहरुको स्वर गुन्जन्थ्यो। उपन्यासमा मलाई नारी पात्रहरु उभ्याएर ठूलै बहस गर्न मन थियो। तर बाह्र–तेह्र वर्षकी बालिका ‘म’ पात्र बनेर आइन् र मन–मष्तिक नै ओगटिन्। मैले चाहेर पनि छोडिन। तिनले पनि पुरै उपन्यासभरि साथ दिइरहिन्। तिनीसँगै आउँथे, जान्थे राम र हीरा। जो कलाका मिल्ने सखी थिए। जसलाई मैले पुनर्वासमा भेटेको थिएँ।
बाह्र–तेह्र वर्षीया कला, जो कहिल्यै अरुको घरमा बास बसेकी छैन। अरु त अरु घरमा पनि एक्लै सुतेकी हुन्न। त्यस्ती बालिका जब पहिलोपटक नछुनी हुन्छे, त्यसपछि समाजले भिराएको विल्ला—छाउगोठमा पुग्छिन्। अनि सुरु हुन्छ, कलाको संघर्ष।
शर्मिला भुलको मृत्युको किस्साले मन पिरोलिएको थियो। प्रायः अन्तरक्रियाहरुमा उदाहरण बनेको थियो, शर्मिला भुलको मृत्यु। तिनकै छायाँ थिइन्, भागरथी भुल नामक पात्र। छाउगोठमा आएर डाकिन् तिनैले भरत काका र महादेवको सर्प। त्यहीँ हेरेँ, कला र भागरथीको संगत।
छाउघर शीर्षकले पनि सजिलै अड्कल लाग्छ, यो उपन्यास छाउपडी प्रथा सम्बन्धी नै लेखिएको कृति हो भन्ने। एकादुईले सम्झाएका पनि थिए, शीर्षक परिवर्तन गर्नुस् भनेर। गरिनँ। किनभने शीर्षकले नै छाउगोठलाई भत्काउने पहिलो प्रयास गरेको थिएँ। गोठलाई हटाएर घर थपें। कृपया त्यसैले आफु बाँचेको परिवेशमा भेटिएको कुरितीलाई निमिट्यान्न पार्न सहयोग गरोस् भन्ने हेतुले छाउघर लेखें।
उपन्यासको विषय नै घाम अस्ताउने समाजको छाउपडी प्रथा लिएँ। यो कुरिती र अन्धविश्वासले भरिएको समाजका महिलाहरुको दर्दनाक आवाज उठाएँ। परम्परागत रुपमा जरो गाडेर बसेको कुप्रथालाई सरकारी–गैरसरकारी संस्थाहरुले आजसम्म हटाउन नसकेको समाचार आइरहेको बेला मैले आख्यानमार्फत् छाउपडी प्रथाविरुद्ध वकालत गर्ने प्रयास गरेँ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २३, २०७३ १५:४७:३०